खाडीमुलुक जाने हजारौँ युुवा समस्यामा, समाधान गर्ने कस्ले ? | Rajmarga
खाडीमुलुक जाने हजारौँ युुवा समस्यामा, समाधान गर्ने कस्ले ?
कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहँुदा ठगी गर्न सहयोग पु¥याउने एजेण्ट वा दलाललाई कारबाही नभएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक रोजगारबारे परामर्श, निःशुल्क सीपमूलक तालीमलगायतका काम आप्रवासन परियोजनाले गर्दै आएको दाबी गरेको छ । रासस
Previous post: एमाले–माओवादी संयुक्त कार्यक्रम, ब्यानर विवाद : मान्छे सम्हाल्ने जिम्मा बद्री पंगेनीलाई !
Next post: बेलायतमा यसरी सकियो ११ औँ यलम्बरहाङ् कप